नेका नगर सभापति साहद्वारा पुलचोकको निरिक्षण – खोज खुलासा
Home > Pages > नयाँ समाचार > नेका नगर सभापति साहद्वारा पुलचोकको निरिक्षण
खोज खुलासा १८ आश्विन २०७८, सोमबार १९:०० नयाँ समाचार, समाजLeaveacomment
नेपाली कांग्रेस जनकपुरधामका नगर सभापति एवम् मेयरका प्रत्यासी मनोज कुमार साहले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ क्षेत्रको निरिक्षण गरेका छन । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ पुल चोकस्थित कबिर कुटीदेखि पुल चोकसम्म पानीको निकास नभएका कारण उत्पन्न समस्याको उनले सोमवार निरिक्षण गरेका हुन । पानीको निकास नभएका कारण सडक जिणर् भएको कारण सो क्षेत्रका सयौं नागरिक समस्या परेका छन । पानीको निकास नभएका कारण वर्षा हुदा सडकमा पानीको स्तर बढदा घर घरमा पानी छिर्ने गरेको छ ।
पानीको निकास नभएका कारण अनिल सिंह , राजेन्द्र महतो , रामभवन सिंह लगायतका ६ दर्जनभन्दा बढीको घरमा पानी छिर्ने गरेको छ भने सडक हिलाम्य भएका कारण आवत जावतमा समेत समस्या हुने गरेको छ । सो क्षेत्रमा अविलम्ब नाला निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको स्थानीयहरुको मांग रहेको छ । अहिले वर्षायाम बांकी नै रहेको र कुनै बेला पनि भिषण वर्षा हुन सक्ने सम्भावना भएकोले पानी घरमा छिरी नोक्सान हुन सक्ने भएकोले अविलम्ब नाला निर्माण गर्नुपर्ने मांग स्थानीयहरुको रहेको छ । निरिक्षण गर्दै मेयरका प्रत्यासी समेत रहेका साहले समयमै नाला निर्माण हुन नसके स्थानीयहरु मारमा पर्ने भएकोले सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनीधिहरुको ध्यानाकृष्ट समेत गराएका छन ।
खोज खुलासा २५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १८:००
इन्द्रेणी कार्यक्रमले हेलम्बुमा १७ परिवारलाई आवास बनाइदिने